फ्राइडे रिलिजः रोमियो, मेला, तान्द्रो र सकस, कस्ले मार्ला बाजी ? « News24 : Premium News Channel
फ्राइडे रिलिजः रोमियो, मेला, तान्द्रो र सकस, कस्ले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । यो शुक्रबार आजबाट ४ वटा फिल्महरु रिलिजमा आएका छन् । हरि पन्तको प्रस्तुती, बसन्त निरौलाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘मेला’ हलमा लागेको छ । फिल्ममा सलोन बस्नेत, आमेष भण्डारी र अशिष्मा नकर्मी लगाएतको अभिनय रहेको छ ।
फिल्मको निर्माता हरी पन्तका अनुसार फिलमले बिहानी शोमा सुखद सुरुवात गरेको छ ।
साथै सबै हलमा दर्शकको उपस्थिती सन्तोषजनक नै रहेको जानकारी गराईएको छ ।
यस्तै, यसै शुक्रबारबाट निर्माता हसनराजा खानको निर्माण, शंकर कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘रोमियो’ पनि रिलिज भएको छ । फिल्ममा हसनराजा खान, नीशा अधिकारी, मेलिना मानन्धर, ओसिमा बनुको मुख्य भूमिका छ ।
त्यस्तै यसै साताबाट दयाहाङ राइको केन्द्रिय भूमिका रहेको फिल्म ‘तान्द्रो’ पनि हलमा लागेको छ । साप्तेन भुटियाले यो फिल्मलाई निर्देशन गरेका हुन् । यसै साताबाट फिल्म ‘सकस’ पनि रिलिज भएको छ । त्यसोत, गत साता रिलिजमा आएको फिल्म ‘ऐश्वर्य’ तेश्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ भने ‘फाटेको जुत्ता’ दोश्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ ।
एकसाथ ४ फिल्म रिलिज हुनु, नेपाली फिल्मका लागि दुर्भाग्य नै हो ।